Olee otú Naghachi ehichapụ faịlụ site na Buffalo mpụga ike mbanye?
Igosi Buffalo mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
1 Olee naghachi ehichapụ faịlụ site na Buffalo mpụga ike mbanye?
M mkpa naghachi ọrụ m faịlụ site na m mpụga ike mbanye. Ọ bụ a Buffalo 160GB mbanye. N'ihi ihe ụfọdụ, m na-ehichapụ ọrụ m faịlụ site na ya. Ọ bụ n'ebe ahụ ka a ụzọ na-m faịlụ azụ? Echiche ọ bụla kpọrọ ihe. Daalụ nke ukwuu.
Buffalo bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu mpụga ike mbanye ụdị. Ma, dị ka a Buffalo mpụga ike mbanye ọrụ, i nwere ike okosobode data ọnwụ mbipụta, dị nnọọ ka e kwuru ikpe. Ị na-nkụda mmụọ n'ihi na ị maa faịlụ niile nwere ike ruo mgbe ebighị ebi. Ma, ọ bụghị n'ezie nanị eziokwu. Nke bụ eziokwu banyere faịlụ furu efu gị Buffalo bụ na ha na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data tupu ọhụrụ data na-edochi ha. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eji gị Buffalo mpụga ike mbanye, ị nwere ike ikekwe weghachite furu efu data site na ya na a data mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a Buffalo mpụga ike mbanye data mgbake omume na-enyere gị iji naghachi ehichapụ, Ị na rụrụ arụ faịlụ site na gị Buffalo mpụga ike mbanye. Na ya ọrụ-enyi na enyi na n'ihe ize ndụ-free atụmatụ, ị nwere ike naghachi niile furu efu faịlụ, gụnyere videos, photos, music, akwụkwọ faịlụ, wdg
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Naghachi iji weghachite data si Buffalo mpụga ike mbanye ugbu a.
2 Igosi Buffalo mpụga ike mbanye Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Nke a ndu na-eme na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Ọ bụrụ na ị nwere Mac, ị nwere ike ibudata Mac version na-eso yiri nzọụkwụ hazie mgbake.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite Buffalo mpụga ike mbanye data mgbake
Dị nnọọ ka n'okpuru image agwa, i nwere ike inwe 3 mgbake ụdịdị mgbe launching usoro ihe omume. Naghachi ehichapụ faịlụ site na Buffalo mpụga ike mbanye, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Biko hụ na gị na Buffalo mpụga ike mbanye nwere ike ghọtara site na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Buffalo mpụga ike mbanye
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa ịhọrọ gị Buffalo mpụga ike mbanye na pịa "Malite" button ka usoro ihe omume Doppler faịlụ na ya.
Ọ bụrụ na faịlụ furu n'ihi mbanye formatting, ị nwere ike nọ n'ọrụ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi data si Buffalo mpụga ike mbanye
Mgbe scanning dị n'elu, hụrụ ọdịnaya na gị Buffalo mpụga ike mbanye niile ga-egosipụta na windo.
Ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ na ị chọrọ iji naputa, wee pịa "Naghachi" ịhọrọ a ọhụrụ mbanye na-ndị natara faịlụ.
Olee otú Zọpụta Ndi ana-akpo si iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS ka Computer
Olee otú mmepụta oyiri draịvụ ike gị - Atụmatụ na usoro
Top 5 Draịvụ Data Recovery Software
Olee otú Zuru Ihichapu a Draịvụ
Olee otú Naghachi Data si PS3 ike mbanye
Windows Vista Draịvụ Iweghachite: Data na System Iweghachite
Fujitsu Draịvụ Iweghachite Tutorial - Olee otú iji weghachi furu efu faịlụ site na Fujitsu Ha
> Resource> Draịvụ> Buffalo mpụga ike mbanye Data Recovery Guide